बीबीएलः कस्तो रह्यो सन्दीपको पहिलो ओभर ? - Everest Dainik - News from Nepal
बीबीएलः कस्तो रह्यो सन्दीपको पहिलो ओभर ?
२०७५, २५ माघ शुक्रबार
काठमाडौं, माघ २५ । बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीबीएल) र यूएई र नेपालबीचको सिरिज खेलेर बिग ब्यास लिगमा फर्किएका नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले ब्रेसबर्न विरुद्धको आफ्नो पहिलो ओभरमा ८ रन खर्चिएका छन् । आठौं ओभर बलिङ गर्न आएका सन्दीपको पहिलाे ओभरकाे चाैथो बलमा क्याच ड्रप भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस नेपाललाई तेस्रो सफलता, सन्दीपले लिए विकेट
लाइभ हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्
ट्याग्स: BBL, sandeep lamichhane
भारतबाट आएका युवकको मृत्यु, कोरोना रिपोर्ट आउन बाँकी
बहिनीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा दाजु पक्राउ